चीनमा बन्दीझैं बसेका विद्यार्थी भन्छन्, ‘फिर्ता नलाने भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्छौं’ « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 8 February, 2020 9:16 am
काठमाडौं, २५ माघ । कोरोना भाइरस सन्त्रासले विश्वविद्यालयको होस्टेलमा बन्दीझैं बस्न बाध्य नेपाली विद्यार्थीले स्वदेश फिर्तीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल सरकारले स्वदेश फर्काउन आलटाल गरेपछि चीनको वुहान सहरमा रहेका विद्यार्थी छटपटिएका हुन् ।
‘हामीमाथि खेलवाड भएको छ । समस्या पर्दा राज्यले हेर्छ भन्ने अनुभूति गर्न पाइएन,’ नेपाल फर्कन आवेदन दिएका एक विद्यार्थीले विच्याटमा भने, ‘अब हामी विश्व समुदायसँग अपिल गर्नेछौं । विश्वमा मानवता बाँकी नै होला !’
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सम्बोधन गर्दै दुई दिनभित्र स्वदेश फिर्ताको आग्रह गरेका हुन् । नत्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न बाध्य हुनेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘कि हामीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्‍यो, कि तत्काल कोही मन्त्री वुहान आएर अभिभावकत्व दिनुर्पयो भनेर आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारले आफ्ना नागरिकका सट्टा विदेशी कूटनीतिज्ञका कुरा सुन्दा अचम्मित भएको उनीहरूको भनाइ छ । एक विद्यार्थीले भने, ‘यो हाम्रो निरीहताको पराकाष्ठा हो । साथीहरू आफ्नो मुलुक पुगेको दुई साता हुन लागिसक्यो । हामी अझै सरकारको बाटो हेर्दै छौं ।’ भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमारलगायत मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई लगिसकेका छन् । अमेरिका, फ्रान्स, टर्की, साउदी अरेबियाका नागरिक त्यसअघि नै फर्किएका थिए ।
हुपेई प्रान्तका संक्रमित अस्पतालमा शड्ढया नपाएपछि घरमै उपचार गराउन थालेको समाचार चाइना डेलीले छापेको छ । ‘नेपाल सरकार भने चीनमै राम्रो व्यवस्था छ भनेर चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको कुरामा मस्त छ,’ चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका एक विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रो जीवनमाथि सरकारले खेलवाड गरिरहेको छ । मरून् भन्ने आसय देखियो । अन्यथा अब स्वदेश फर्काउन कुन शक्तिले रोक्छ ? सरकारले सहजीकरण गरिदिए फर्कन्छौं भन्दा पनि नपाउने ?’
भियना अभिसन्धिअनुसार सम्बन्धित देशको दूतावासले आफ्ना नागरिकको अवस्था संकलन गरी सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले उक्त कार्य गरिरहेको छ । दूतावासले १ सय ८० जनाको तथ्यांक संकलन गरेर ‘क्लियरेन्स’ को लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । तर, सरकारले ढिलाइ गरेको छ । राजदूत लीलामणि पौड्याल सम्पर्कमा नआएको विद्यार्थीले बताए ।
दूतावास उपप्रमुख सुशील लम्सालले विद्यार्थी फर्काउन पहल गरिरहेको बताए । ‘हामी सरकारको सम्पर्कमा छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप स्थान तय गरेर फर्काउने पहल सरकारको छ,’ लम्सालले भने, ‘विद्यार्थी निकै असहजत अनुभव गरिरहेका छन् । कतिपयले गगनचुम्बी भवनमा एक्लै रहनुपरेको र अब हाम फाल्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाउन थालेका छन् । हामी सम्झाइबुझाइ गरिरहेका छौं ।’
न्युरो सर्जनमा पीएचडी सकेका डा. गौरव पोखरेल भन्छन्, ‘हामी अन्योलमा छौं । राजदूत नै सम्पर्कमा हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई अपिल लेख्यौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायतसँग हारगुहार गरे पनि सुनुवाइ भएन ।’
सरकारले प्रस्ट भनिदिए अन्य उपाय अवलम्बन गर्न बाटो खुल्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले नेपाली नागरिक हौं भनेर हामीलाई शिर ठाडो पार्ने अवस्था गरिदियोस् । तर सरकारले आनाकानी गरेको देखेर हामी अचम्मित छौं ।’ उनले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काएर खाली भवनमा म्याट ओछ्याएर निगरानीमा राख्न अपिल गरे। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स फर्किएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरस देखिएको छैन ।
चीनमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । वुहानमा पीएचडी गरिरहेकी प्रमिला देवकोटा भन्छिन्, ‘चीनकै समाचार पढिदिए हुन्छ सरकारमा बस्नेहरूले । हामी कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पर्खने पखाइमा रहँदा सरकारले गैरनागरिक जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।’ चीनमा संक्रमितलाई घरमै राखेर उपचार प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताइन् । ‘अस्पतालमा बेड अपुग छ । पिउने पानी छैन’, देवकोटाले भनिन्, ‘वुहानमा १० हजारभन्दा बढीलाई कोरोना भाइरस लागिसकेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट